Android လုလင်: September 2013
Viber ကို PC ကနေ ခေါ်မယ်
အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတယ်နော် ။ ခေတ်နောက်ကျမကျန်ခဲ့လေအောင် သုံးကြစို့။ အဆင်ပြေတယ်ဗျာတကယ်။ ကျွန်တော် ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ်လိုက် ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 7:00 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ, ဆော့ဝဲ ။လုပ်ဆောင်ချက်
Android Phone ပေါ်မှာ DJ Mixing လုပ်ခြင်တဲ့သူတွေအတွက် edjing PRO DJ mixer turntables
edjing PRO DJ mixer turntables အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Update လေးပါ
Android Phone ပေါ်မှာ DJ Mixing လုပ်ခြင်တဲ့သူတွေအတွက်
edjing PRO DJ mixer turntables လေးကိုသုံးကြည့်လိုက်ပါ။
့Effect လေးတွေလဲတော်တော်လေးစုံပါတယ်။မိမိ Mixing လုပ်ထားတာတွေကို Recordingလုပ်ထားလို့ရတဲ့အပြင် Facebook& Twitter စတာတွေဆီကိုပြန် Share လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 8:19 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Gtalk Voice & Video Chat ထည့်နည်း နောက်တစ်နည်းပါ
မင်္ဂလာပါ…။Talk2ထည့်နည်းပို့စ်တခုကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုင်လုပ်လို့ အဆင်ပြေသူတွေရှိ
သလို အဆင်မပြေသူတွေလဲရှိကြပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ ဗားရှင်း နဲ့ မိုဒယ် လိုက်ပြီး အဆင်မပြေတာရှိသလို၊
အခုပို့စ်က Android Version 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများအတွက်ပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 8:14 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည်လင်စေမဲ့ Perfectly.Clear. v2.0.7
မိတ်ဆွေများအားလုံးရဲ့ Android ဖုန်း
ကဲသူငယ်ချင်းတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ game လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဆော့နေ
ရေးတဲ့အချိန် 7:00 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
စကိတ်စီးတဲ့ဂိမ်းအလန်းလေး Tech Deck Skateboarding Apk
ရေးတဲ့အချိန် 7:38 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အခြားသော Web Browser များထက် 55% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Puffin Web Browser
ရေးတဲ့အချိန် 7:32 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
zapya အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် နောက်ဆုံး Update လေးပါ
ရေးတဲ့အချိန် 7:29 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android ပေါ်မှာ သုံးရမဲ့ Firefox Browser for Android version 24.0 Apk
Android အတွက် browser လေးပါ။ အသစ်လေးမို့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အားလုံးလည်း သုံးဖူးကြမှာပါ။
ကွန်ပျူတာမှာလည်း သုံးဖူးကြတယ်ဆိုတော့ သိပ်ပြီးရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ တော်တော်များများသော phone တွေမှာလည်း အသုံးပြုနေတာမို့လို့ သိပ်ပြီးမရှင်းပြတော့ပါဘူးနော်။
မေလ်းပို့ပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့ အစ်ကိုအတွက် Android USB Drivers အတော်များများကို ရှာဖွေစုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ရှာဖွေဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်လည်းကျွန်တော် Android USB Drivers များကို ထပ်တင်ပေးသွားပါမယ့်ခင်ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 7:00 AM7comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ, ဆော့ဝဲ
Official Firmware ပြန်တင်ရင် Step2မှာ Fail ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ error
ဘာ Firmware ပြန်တင်တင် recovery ထဲပဲပြန်ပြန် ရောက်သွားတဲ့ error
တွေကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ရှင်းပါမယ်
ရေးတဲ့အချိန် 5:10 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Next launcher အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
9လပိုင်း 13 ရက်နေ့ ထွက်Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Next Launcher ဟာလူကြိုက်များတဲ့ Android Theme application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဗားရှင်းအသစ်မှာ အရင်ကနဲ့မတူဘဲ အရမ်းလန်းလာတယ်ဗျာ
ယခု version မှာတော့ 3D Screen Mode ဆိုတဲ့ features အသစ်တစ်ခုပါဝင်လာပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Screen ဒီဇိုင်းကို 3D Transitions/effect တွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။ Next Launcher နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အခြား Theme တွေထပ်မံထည့်သွင်းလို့လည်းရပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 4:10 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ Home Launcher
Samsung Galaxy Ace S5830i အတွက် Original Official Firmware တွေပါ..
Samsung Galaxy Ace S5830i အတွက် Original Official Firmware တွေပါ.. တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. နိုင်ငံအလိုက် တစ်ခုချင်း ဒေါင်းလို့ရပါတယ်..
အကြောင်းအရာ Firmware Download
** New version supports widget withaton of customization and shortcut. Long press on home screen to addanew one **
You can add most of task into notification bar and quickly kick it off in 1tap. It supports over 60 built-in tasks, including
iphone မကိုင်နိုင်လို့ အားမငယ်နဲ့နော် Settings ကို iPhone Style လေးနဲ့သုံးမယ်လေ
Settings is iPhone style quick-setting app.
Android ရဲ့ System ပိုင်း color ကို စိတ်ကြိုက် customize လုပ်နိုင်မဲ့ XBlast Tools version 1.5.8 Apk
အခုနောက်ပိုင်းမှာ android အသုံးပြုတဲ့ user တွေများလာတဲ့အခါများလာပြီး modern မြှင့်တွေလည်း ကိုင်လာတာများလာတယ်လေ။ လူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာ အနည်းဆုံး android version 4.0 လောက်က ရှိနေပြီးသားပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ application လေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီ application လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Root ဖောက်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:08 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
The new multipurpose Notepad from Royal Bird team. We created for youasimple application for notes, withanew features. Write down everything comes to your mind and share with your friends.
Taskbar – Windows 8 Style
အရင်ကထွက်ခဲ့ window7tasbar ထက်ပိုလန်းတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ
Taskbar – Window 8 style isatool that mimics Window 8 Taskbar. It comes in handy when you want to launch apps, common settings, favorite contacts quickly.
- “Start” button
Tap on the “start” button to open taskbar. Scroll up/down to launch app. If you add folders, contacts, settings, click on theme to execute.
- Change start button location
Click an hold forawhile, then move around to change its location.
- Smart “Start” button
Start button will be dimming if taskbar does not open in two seconds. It also learn the way you use “start menu” area and taskbar, then smartly adjust them for you.
ဒီတစ်ခါ Samsung Galaxy Nexus I9250 4.3 ကို
ရေးတဲ့အချိန် 6:25 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မိုးတွင်းကုန်ပြီဆိုတာ သေချာပြီလား မိုးအုံ့ပြီး လျှပ်လက်နေတယ်နော်
ရေးတဲ့အချိန် 7:00 AM 1 comment: ရေးသားသူ ရာဇ၀င်ထဲက အမောင်လုလင်ပျို
ထိုင်းထီ ၊မြန်မာထီများကို ဆော့ဝဲတစ်ခုထဲကနေ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တိုက်စစ်လို့ရတဲ့ Lottery SuBoo apk
ဒါလေးကတော့ Cbox မှာ တောင်းဆိုထားတဲ့သူရှိလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 7:30 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
UCam Ultra Camera Pro v4.0.2 For Android
Android ဖုန်းတွေအတွက် မိမိတို ရဲ့ လှပတဲ့ ပုံစံလေးများကို တခြားနဲ့မတူနဲ့ ပုံစံများနဲ့ ရိုက်ပေးမယ့်
UCam Ultra Camera Proလေးပါ။Google Play မှာတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ရောင်းတာပါ။
Google play လင့်ကတော့
ဓာတ်ပုံတွေကို ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ရိုက်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
ဆိုဒ်ကလည်း သေးသေးလေး အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 8:09 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဖုန်းမှာ screenshot အလွယ်တကူလုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 8:06 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို အစစ်လား Clone လားဆိုတာကိုခွဲခြားပေးနိုင်မယ့် CPU-Z apk
အခုအခါမှာ Android ဖုန်းတွေဟာ Branded ရော Clone OS ရော ၀င်ရောက်လာတဲ့အတွက်သာမန်အသုံးပြု သူတွေ သတိမထားမိတတ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြမယ့် CPU-Z Android apk လေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ CPU,display,Ram,Soc,Sensor,Battery အစရှိတဲ့ အသေးစိတ်အချက်လက်တွေ အကုန်လုံးဖော်ပြနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟာ အစစ်ဟုတ်မဟုတ်အလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် တခြားအသုံးဝင်တဲ့ ဖုန်းရဲ့ Hardware နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုပါ ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Android ဖုန်းမှာ ဈေးဝယ်စာရင်းလေးမှတ်ပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ကြမယ်.. Shoppint List 1.0
Shoppint List ဆိုတဲ့ Apk လေးကို Android ဖုန်းမှာ သွင်းထားပြီး ဝယ်ရမယ့်စာရင်းတွေကို မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်.. အိမ်ရှင်မများသာမက မကြာခဏဈေးဝယ်ထွက်ရတဲ့ ကိုကိုများလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
ပထမ အကွက်မှာ ဝယ်ရမယ့်နေရာ သို့မဟုတ် ဈေးစာရင်းအုပ်စုကို ရေးနိုင်ပါတယ်..
လာပြန်ပြီနော် ကိုကို ညီညီတွေ အတွက် ဂိမ်းလေးတစ်ခု
Vroot 1.7 root လုပ်ရာမှာနာမည်ကြီးဆော့ဝဲလေးပါ..........super user english လိုဖြစ်သွားပါပြီ
Root လုပ်ရာမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ.......
အရင်ကတော့ root လုပ်ပြီးရင် super user က တရုတ်လိုပေါ်ပါတယ်..
ခုတော့ version မှာ တော့ english လိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.......တရုတ်စာမမြင်ချင်သူများအတွက်
အထူးသင့်လျော်မယ့် root tools လေးဖြစ်ပါတယ်..............
ရေးတဲ့အချိန် 7:56 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android အတွက် အကောင်းဆုံး Tool - ZDbox v3.9.317
မိတ်ဆွေများ Android Device မှာ Tool တွေ သုံးကြပါတယ်.. ဘက်ထရီစားသက်သာစေတဲ့ Tool, နောက်ကွယ်ကနေ Run နေတဲ့ App တွေကိုသတ်နိုင်တဲ့ Tool , ဘက်ထရီအားပြည့်ရင် အသံပေးတဲ့ Tool, App တွေကို SD ထဲပြောင်းတဲ့ Tool စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ..
Android ရဲ့ system တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ Android Tuner v0.10 Apk
ဒီ application လေးက android သုံးတဲ့ user တွေအတွက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Android system တစ်ခုလုံးရဲ့ feature
တစ်ခုချင်းစီကို ဖော်ပြပေးတဲ့အပြင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် application တွေကိုလည်း ပြင်ဆင်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ သူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ feature တွေကို
အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ feature တွေကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုတွေ ဘာအတွက်အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။
Viber Lock နဲ့ Viber ကို Lock ချထားရအောင်
ဒီကောင်လေးကို Install လုပ်ထားပြီး Android သုံး Viber ကို Lock ချထားလို့ရပါတယ်.. Lock အတွက် Pattern နဲ့ Password ကြိုက်တာ သုံးနိုင်ပါတယ်..
Massage ကို ခေတ်ဆန်ဆန်သုံးကြရမဲ့ Sliding Mseeaging Pro version 7.40
ဒီလိုပုံစံလေးက viber နောက်ဆုံး version ကိုအသုံးပြုကြတဲ့ မိတ်ဆွေတော်တော်များများတော့သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို design ကို viber မှာတော့အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ Application လေးက ရိုးရိုးတန်းတန်း massage ပို့ရင်းအသုံးလို့အဆင်ပြေစေတာမို့လို့ပါ။ Viber မရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ ရိုးရိုး massage ကိုပဲ style ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ feature က massage ပို့တဲ့အခါမှာ ကိုယ်က
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို massage ပို့ချင်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် window တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းမသွားပဲ ဘေးကနေ slide နဲ့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ အကြောင်းရာတွေကိုရေးဖို့အတွက် box ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Facebook သုံးစွဲသူ Android ဖုန်း /Tablet ပိုင်ရှင်တွေအတွက် 12 ရက်9လပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့
Facebook version အသစ်လေးပါ Update မလုပ်ရသေးရင် အောက်မှာရယူုနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 7:37 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Mouse & Keyboard Remote (.apk)
ဒီတစ်ခါမိမိကွန်ပျူတာ PC & Laptop တွေကို
မိမိ Andriod Phone နဲ့ပဲ Mouse နှင့် Keyboard အဖြစ်
Remotly control your PC’s mouse and
keyboard via Wi-Fi! Be lazy!
The Mouse and Keyboard Remote turns your
Android phone into a
wireless remote control for your PC! You can
control the mouse withatouchpad (like laptops),
and type text with the keyboard software from
Android orabuilt-in hardware keyboard.
You also have the ability to send frequently
used shortcuts (show desktop, etc.). The remote
control works via Wi-Fi.
-Mouse (Multitouch touchpad)
-Keyboard (Live | Manual)
-Speech recognition (Text | Commands)
-Media player (iTunes | Windows Media |
VLC Player | …) (Pro version)
-Slideshows (PowerPoint | Adobe Reader |
Impress | …) (Pro version)
-Scrolling (9gag | Default) (Pro version)
-Motion controller (position sensors) (Pro version)
-Shortcuts (shutdown | close window | …)
-Socl Video Party Remote
It requires no installation or registration..
VRoot v1.6.0 (မြန်မာ Version)
ရေးတဲ့အချိန် 12:10 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Samsung Phone firmware များ စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
password = MMAS
Galaxy mini [s5570]_(v.2.3.6)(140Mb)
ရေးတဲ့အချိန် 11:40 AM 13 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Launcher တွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Lightning Launcher (.apk)
သူရဲ့ Setting တွေကလည်းအများကြီးပဲနော်....ဒေါင်းပြီးတော့စမ်းသာသုံးကြည့်ပါ..
ရေးတဲ့အချိန် 7:30 AM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဆင်းကတ်ရဲ့ pinlock/puk lock အကြောင်းနဲ့လော့ကျရင် ပြန်ရအောင် လုပ်နည်း
Network Lock ဖြစ်တာဖြည်ဖို့ အထောက်အပံ့ရအောင် Network Unlock Code အလကားလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပို့စ်တင်လိုက်တာ.. Sim Card Pin Lock ကျတာဘယ်လိုဖြေရမလဲ မေးလာပြန်တယ်ခင်ဗျ.. ဒီပို့စ်အတွက် အဖြေလိုက်ရှာရင်း *mm-mpxteam *
မှာ *ZawMyoOo* ရေးထားလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. မူရင်းအတိုင်းပါ..
SIM card ရဲ့ PIN or PUK lock အကြောင်းလေးနဲ့ lock ဖြစ်သွားရင် ဖြေရှင်းနည်းကိုလည်း အနော်သိသလောက်လေး ပြောချင်ပါတယ်ဗျ....
အနော်လို Beginner တွေအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဒီပို့စ်လေးရေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ......
PIN lock နဲ့ PUK lock ဆိုပြီး Sim lock (2)နှစ်မျိုးရှိပါတယ်...
အနော်တို့နိုင်ငံမှာ ၁၅သ်ိန်းတန် ၅သိန်းတန် ၂သိန်းတန် အားလုံးမှာ မူလ PIN code က 12345 ပုံမှန်နံပါတ်ပါ....သိသူများလည်းသိမှာပါ....
မသိသူများကလည်း PIN lock - 12345 ကိုမှတ်ထားလိုက်ပါ...
တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေဟာ Sim Card ကို ကဒ်ချိုးပီတာနဲ့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ထားတတ်ကြပါ... တစ်ချို့ကလည်း လွင့်ပစ်တတ်ပါတယ်.....သိမ်းထားရမှန်းမသိကြပါဘူး...တကယ်တော့ Sim Card ချိုးထားပီတဲ့ ကဒ်အခွံဟာသိမ်းထားရပါမယ်ဗျ..ဒါဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်....ဒီကဒ်အခွံမှာ PUK Code တစ်ခါထဲပါပီသားပါ.....
Sim lock လည်းကျရော ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ ဆိုင်ကိုပြေးရပါတော့တယ်....
ဆိုင်သမားတွေကလည်း Sim lock ကျတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကဒ်ချိုးထားတဲ့ကဒ်ရှိမှ Unlock ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့မှာမသိမ်းထားတဲ့သူများကတော့ ဘာမှန်းမသိတာနဲ့တင် MPT ရုံးဆီကိုပြေးရပါတော့တယ်.....
အခုထွက်တဲ့ ၁၅၀၀ တန် MEC TEl မှာတော့PUK ရော PIN ရော ခဲခြစ်အဖြစ်ထည့်ပေးထားပါတယ်...
သဘောကတော့ Sim lock ကျရင်အဆင်ပြေနိုင်အောင်လို့ပါ....
SIM lock ကျသွားရင် မလုပ်တတ် လုပ်တတ်နဲ့ လျှောက်ပြီးလည်းရိုက်မထည့်ပါနဲ့... ဆိုင်ပြေးတာထက်စာရင် ဆက်သွယ်ရေးရုံးကိုတိုက်ရိုက်သွားတာပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ...
အနော်လိုကလိတာ ၀ါသနာပါတဲ့ beginner တွေအတွက်ကတော့ အောက်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်း စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျ....မိမိဆန္ဒရှိမှ စမ်းသပ်ပါ....အနော်မတိုက်တွန်းပါဗျ...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့် Sim Card က lock ကျပီဆိုရင် ဖုန်းလိုင်းပျောက်သွားပါမယ်..Unlock ပြန်လုပ်ဖို့ ဖုန်းက PUK Code တောင်းပါလိမ့်မယ်...PUK Code က ခုနကအနော်သိမ်းထားပါလို့ပြောတဲ့ ကဒ်ချိုးပီတဲ့ကဒ်ထဲမှာ ပါပီသားပါ...
- Unlock ပြန်လုပ်ပုံကတော့ အဲ့ဒီဆင်းကဒ်ချိုးလိုက်တဲ့ ကဒ်မှာပါတဲ့ PUK Code (၈) လုံးကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီး OK နှိပ်ပါ....
- PIN Number အသစ်ပြန်လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်... 12345 လို့သာ ရိုက်ပြီး OK နှိပ်ပါ.....
- နောက်တစ်ခေါက် PIN Number ကို Confirm လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်....12345 လို့ထပ်ရိုက်ပေးပြီး OK နှိပ်လိုက်ပါ...ဒါဆိုရင် Sim Lock, ပြုတ်ပြီး ဖုန်းလိုင်းပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ.....
ဒီအောက်ကနည်းလေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဆင်းကဒ်ကို Lock ချထားချင်သူများအတွက် ပြုလုပ်နည်းလေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ...
အနော်ကတော့မတိုက်တွန်းပါဘူး....Sim Card Lock ချချင်တယ်ဆိုရင်လဲ အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Antivirus ဆော့ဝဲလ်တွေမှာ Sim Card Lock Function ပါတာတွေ အသုံးပြုထားရင်လဲ မိမိတို့ရဲ့ ကဒ်ကို Lock ချထားနိုင်ပါတယ်ဗျ....မိမိတို့ဆန္ဒရှိလို့ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုသူများ အဆင်ပြေစေရန်နှင့် ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ဘာလို့ SIM Lock ချထားရပါသလဲ ဆိုရင် SIM Card ကို အခြားသူတစ်ဦးဦးက အသုံးမပြုနိုင်အောင်ချရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
SIM Lock ချထားပါက မိမိဆင်းဒ်ကဒ်ကို ဘယ်ဖုန်းမှာထည့်ထည့် ကုဒ်တောင်းနေမှာပါ ကုဒ်မသိရင် သုံးလို့မရတော့ပါဘူး ဘယ်ဖုန်းကိုပဲ ထည့်ထည့်ပါ ဆင်းဒ်ကဒ်မှာ Effect ဖြစ်နေတာပါ ....အဲဒါကြောင့်ချရတာပါ...
မလိုအပ်ရင်တော့ SIM Lock ကို ဖွင့်မထားပါနဲ့...
PIN Code ကို မလိုအပ်လျှင် မပြင်ပါနဲ့ မကလိပါနဲ့...
ပြင်ချင် Lock ချချင်သူများကတော့ မူလ PIN Code က *12345* သာဖြစ်ပါတယ် အဲတာကို ဝင်ချင်ရင် အဲကောင်ရိုက်ပေးမှပွင့်ပါတယ် ...
အဲဒီကုဒ်မရိုက်ဘဲ ကျန်တာတွေ လျှောက်ရိုက်မိရင်တော့ သုံးခါထက်ပိုရိုက်မိရင် လော့ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်..
SIM Lock ပြောင်းခြင်ရင် ပထမဆုံး* 12345* ကိုရိုက်ပါ ကျန်တာရိုက်လို့မရပါ.. ပြီးမှ ကိုယ် ကြို့က်တဲ့ကုဒ်ကိုပြောင်းပါ မေ့လို့မရပါ...ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဗျ...
အနော်ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်ဟာ Bothers တို့အတွက် အသုံးဝင်သွားတယ်ဆိုရင် အနော်ပင်ပန်းရကြိုးနပ်တာပေါ့ဗျာ...
*Credit : *
* ** Ref :*
ရေးတဲ့အချိန် 3:57 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ HD theme concept kitkat HD7in 1 (version 2.1 ) apk
နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ HD theme လေးပါ။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ google ကနေ
နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ android version
4.4 kit kat စတိုင်theme လေးဆိုတော့ kit kat ကိုသုံးနေရသလိုခံစားနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ဗားရှင်း - ၂.၀.၄၃၀၄
ဖိုင် အရွယ်အစား - ၃.၆၃မီဂါဘိုက်
လိုအပ်သော အန်းဒရိုက် - ၂.၁ နှင့် အထက်
ကူးယူသည့် အရေ အတွက် - 1464
အန်းဒရိုက် အာဏာပိုင်များ၊ အေဗီစမ်း သပ်သူများ၊ ပညာရှင်များ နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ သုံးစွဲသူ ၁၀သန်းကျော်မှ ထောက်ခံမှု ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအချက်အလက်များ • ဖျက်ဆီးသော ဖိုင်များ: သွင်းထားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များ နှင့် မှတ်ဥာဏ် ကတ်အတွင်း ရှိပျက်ဆီး နေသော အသုံးချပရိုဂရမ် များကို စစ်ဆေးခြင်း။ • ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်း :့သွင်းထားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ အချက်များ နှင့် ဥပဒေများကို စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ဖော်ပြခြင်းများ ပြု လုပ်ပေးပါတယ်။ • Anti-Theft (စနစ်၏ အသုံးချဖိုင်များ): အင်တာနက်နှင့် စာတိုများမှ သင်ဖုန်းကို ထိန်းချုပ်မှု ပေးပါသည်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:38 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
TanaMe PRO v1.2.19 Apk 14MB
အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးတော့ Viber လိုစကားပြော မက်ဆေ့ ပို့တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါဘဲ
သူရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ကုတ်မတောင်းပါဘူး
ရေးတဲ့အချိန် 3:32 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android Phone ပေါ်မှာ DJ Mixing လုပ်ခြင်တဲ့သူတွေအတွ...
စကိတ်စီးတဲ့ဂိမ်းအလန်းလေး Tech Deck Skateboarding A...
အခြားသော Web Browser များထက် 55% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး...
Samsung Galaxy Ace S5830i အတွက် Original Official ...
iphone မကိုင်နိုင်လို့ အားမငယ်နဲ့နော် Settings ကို...
မိုးတွင်းကုန်ပြီဆိုတာ သေချာပြီလား မိုးအုံ့ပြီး လျှ...
ထိုင်းထီ ၊မြန်မာထီများကို ဆော့ဝဲတစ်ခုထဲကနေ အချိန်န...
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို အစစ်လား Clone လားဆိုတာကိုခ...
Vroot 1.7 root လုပ်ရာမှာနာမည်ကြီးဆော့ဝဲလေးပါ.........
Android ရဲ့ system တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ A...
Massage ကို ခေတ်ဆန်ဆန်သုံးကြရမဲ့ Sliding Mseeaging...
Facebook APK 3.7 Build 353711 (latest version) 16M...
Samsung Phone firmware များ စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်...
Launcher တွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Lightning Launc...
ဆင်းကတ်ရဲ့ pinlock/puk lock အကြောင်းနဲ့လော့ကျရင်ြ...
နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ HD theme concept kitkat HD 7...
Internal Memory နဲတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Apps တွေကို ...
Free call နဲ့ massage အတွက် imo v 3.8.4
ဓာတ်ပုံတွေupload တင်တဲ့ imgr.apk.နောက်ဆုံး update ...
အသစ်ထွက် Android game (Subway Surfer v 1.14.0 (Mon...
လုလင်ပျို အကြိုက်ဆုံး facebook downloader
JellyBean တွေမှာ မြန်မာစာ ရေးတာ၊ဖတ်တာမှန်အောင်လုပ်...
Medieval v2.91 For Android Game
Alarm ပေးလို့ရမဲ့ Wallpaper လေးပါ (.apk)
ကဲ ဒီတစ်ခါ Mebtalk2 အကြောင်းပြောရအောင်နော်
Xperia Go(ST27i) ကို Root နည်း (အဆင်ပြေတဲ့နည်းပါ)
နောက်ဆုံးထွက် viber 3.1.1.15
Y talk အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ apk for android
အရေးပေါ်ဖုန်းတွေ ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် Jas hotline မြန်မာ ...
ဖုန်း screen ထောင့်ချိုးလေးတွေကို ကွေးကွေးလေး နဲ့ ...
DropBox မှာ 48 Gb Free ရအောင်လုပ်နည်း..
မန်ဘာဝင် 200 ပြည့် အမှတ်တရနှင့် ဖုန်းတစ်လုံးကိုအလန...
C8813 ကို (GSM/CDMA) နှစ်မျိုးလုံးသုံးနည်း
MPT Service v1.0.2 (မြန့်မာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မူ့)
MMSD Smart Zawgyi V1.1 (Smart Zawgyi Font Installi...
Android Osဖုန်းတွေထဲကHuawei C8813 အတွက် အင်တာနက် s...
Facebook messenger အသစ် v2.7.1
နှလုံးကျန်းမာရေး မြန်မာ apk
Easy uninstaler pro-clener v 2.2.2
တစ်သောင်းသုံးကတ် တစ်သောင်းတစ်ကတ် ငွေဖြည့်ကတ် ဟတ်နည...
Sms တွေကို cloud ပေါ်မှာသိမ်းပေးမယ့် cloud sms apk
genius scan pocket
Viber က massage တွေ backup လုပ်မယ်
ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့အင်တာနက် setting ချိန်ပြီးသားဖြစ...
Facebook v3.6.1 Apk
Hola Accelerator & Unblocker : Internet Speed ကြို...